Wasiirka dib u heshiista Maamulka Hirshabeelle oo gaaray deegaanka Baanyaaleey oo ay ku dagaalameen laba Maleyshiyo Beeleed | RBC Radio
Wasiirka dib u heshiista Maamulka Hirshabeelle oo gaaray deegaanka Baanyaaleey oo ay ku dagaalameen laba Maleyshiyo Beeleed
BAANYAALEEY(RBC RADIO)Wafti wasiiro ah oo ka socda Maamulka Hirshabeelle ayaa Maanta gaaray deegaanka Baanyaaleey ee Gobolka Hiiraan oo ay dhawaanahan ku dagaalamayeen laba Maleyshiyo Beeleed.
Waftiga Maanta gaaray deegaanka Baanyaaleey ayaa waxaa hogaaminaya Wasiirka Dib u heshiisiinta Maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed),waxaana la tilmaamayaa inuu halkaa u tagay sidii uu kulamo ula qaadan lahaa labada dhinac ee dagaalamay.
Ciidamo ka tirsan Maamulka Ahlu Sunna ayaa ku guuleystay iney kala qaadaan labadii Maleyshiyo Beeleed ee dhawaanahan ku dagaalamayey deegaanka Baanyaaleey oo hoos yimaada Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan.
Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed)Wasiirka dib u heshiisiinta Maamulka Hirshabeelle ayaa la filayaa inuu deegaanka Baanyaaleey ka bilaabo waan waan iyo wada hadalo lagu heshiisiinayo beelaha Walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaankaasi.
Maleyshiyaad beeleed kasoo kala jeeda Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa Maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayey deegaanka Baanyaaleey ee Gobolka Hiiraan.